Ps3 waa kulanka video ah in ay diyaariyeen Sony madadaalada computer. Ps3 u taagan tahay saldhigga play 3. ciyaaraha Tani waxay la huleeshay karin ciyaaryahan warbaahinta Client VideoLan in kastoo aad haysataan si ay ula qabsadaan goobaha qaar ka mid ah. VLC waa meel ay u sii qulquli Cajalado iyo videos on network guriga in aad qotomisay. Waa war fiican haddii aad leedahay saldhig Play 3 iyo aad rabto in aad u sii qulquli on your computer. Haddii aad gudcurka ku sameeya sida loo isticmaalo VLC inay sii qulquli in PS3 markaas i soo biiraan oo ha i tuso sida ay sidaa u sameeyaan.
Qeybta 1: Sidee loo Isticmaalaa VLC durdurka Si PS3?
Qeybta 2: Sida loo ciyaaro files VLC on PS3?
Qeybta 3: Sida loo soo dejinta Videos in PS3?
Qeybta 4: Sida loo Play Videos on PS3?
Tallaabada 1 Open ciyaaryahan warbaahinta VLC
Haddii aadan haysan ciyaaryahan VLC ka soo bixi uga website-ka dibna ku xidh. Furan waxaa ciyaaryahan VLC ku on your computer.
Tallaabada 2 Dooro Network geeyo a
On menu ugu weyn ee ciyaaryahan warbaahinta VLC Riix File, hoos u soo dejiyey menu muuqan doona oo aad riix doonaa Streaming / Wizard haddii aad isticmaalayso Mac.
Haddii aad isticmaalayso Windows u tag File iyo button Wizard guji. On riixaya badhanka Streaming ah daaqad arbushin doonaa ogaysiin aad durdurka in Network. Muujiyo waxaa ku riix Next.
Tallaabada 3 Dooro File si ay u sii qulquli on your computer
On suuqa kala socda in kor booda click Dooro. Tani waxa ay suurtogelin doontaa in aad xulan files warbaahinta in aad rabto in aad sii qulquli ku media player VLC. Guji file warbaahinta la doonayo, ka dibna riix badhanka Next.
Tallaabada 4 Setup network qaybsiga on your computer ah
Hadda, guji multicast UDP. Waxaa markaas amri doono oo idinku inay galaan Network IP address of your computer.
Si aad u hesho cinwaanada IP shabakadda kombiyuutarka aad inay tagaan si ay xaaladda ugu Network qaybsan xarunta on your computer. Ku qor cinwaanka IP shabakadda kombiyuutarka aad ka dibna soo socda guji marka ay dhamaystaan.
Talaabada 5 Stream PS3 ah
Tani waa click la soo dhaafay oo aad u leedahay in la sameeyo, Riix Finish si toos ah u sii qulquli warbaahinta PS3 faylasha isticmaalaya VLC. Tallaabooyinkan waxay u muuqdaan in badan, laakiin ay yihiin crystal cad.
Waxaad sidoo kale ka ciyaari kara faylasha VLC on PS3. Play station 3 ciyaari kara maqal iyo video qaabab sida MKV iyo MP4 . Sidaa darteed, ma kaliya isticmaasho Console PS3 inuu u ciyaaro FIFA ayaa sidoo kale aad ka daawan kartaa videos.
Tallaabada 1 xiro qalabka lagu kaydiyo si ay PS3
Connect qalab lagu kaydiyo si ay dekedda USB ah oo ku saabsan Station Play aad 3 in uu leeyahay files warbaahinta aad rabto inuu u ciyaaro. Wixii drive dibadda adag loo xaqiijiyo waa in baruurta 32 format.
Tallaabada 2 noqda on PS3 ah
Ka dib markii deeruhu qalab lagu kaydiyo aad hadda noqon kartaa PS3 ah.
Tallaabada 3 Dooro qaab faylka ku haboon
Haddaba tag in Menu ee Main on PS3 iyo doortaan qaab faylka aad rabto in aad ku ciyaari. Wixii kiiskan guji badhanka Video iyo muujiyo qalab kaydinta. On aad xukuma PS3 riix badhanka saddexagalka.
Tallaabada 4 Play faylasha VLC
Riix Display All si aad u eegto oo dhan video files. Markaas dooro file video doonayo iyo riix badhanka X on inuu u ciyaaro. Interesting sax ah?
Taasi ma aha oo dhan waxa kale oo aad dajiyaan karaa video files qalabka wax lagu kaydiyo toPS3 warbaahinta kaydinta Console. Waxaa kaliya qasabno yar sida soo socota.
Bareesada in qalab lagu kaydiyo in uu leeyahay video files aad rabto in aad soo dhoofsadaan in PS3 ah.
Tallaabada 2 Dooro Faylal ay u dajiyaan
On Menu ee Main guji Video, ka dibna dooro files in aad rabto in aad soo dhoofsadaan. Markaas riix badhanka saddexagalka.
Tallaabada 3 Import faylasha video
Hadda riix menu fursadaha iyo guji Copy. Markaas raaco amarrada in ay idin siin doonaa shaashadda. Marka la dhameeyo aad keeno doonaa files warbaahinta kaydinta.
Iyadoo PS3 kaa kaydinta bannaanka ah ama kuwa in aad soo guuriyeen ciyaari kara video files waxa on. Video faylasha sida MKV, AVI iyo MP4. Halkan waxa ku jira tilmaamaha.
Tallaabada 1 bareesada aad USB qalab lagu kaydiyo si ay PS3
Connect qalab lagu kaydiyo si ay ugu USB dekedda on PS3 ah.
Tallaabada 2 noqda on your PS3
Hadda jeedi PS3, u tag Menu Main iyo wad si aad Video, taas oo in la muujiyaa doonaa. Markaas riix badhanka saddexagalka aad `xukuma PS3.
Tallaabada 3 Play Video Faylal ay ku PS3
Riix Display All si aad u eegto oo dhan video files. Markaas dooro file video doonayo iyo riix badhanka X on. Tani waxay ugu danbeyn furi doonaa files warbaahinta on PS3 ah.
Halkaa marka ay marayso aad baratay sida loo soo dhoofsadaan video files si PS3, ciyaaro files warbaahinta iyo qulquli VLC in ay PS3. Iyada oo wax alla wixii aad ka heli karo in faylasha qaar aan lagu ciyaari karo PS3 ay sabab u tahay kala duwan ee codecs. Tani waa inaanay iska kaa hor istaagin daawashada cajaladaha on PS3. Si fudud u soo bixi Wondershare Video Converter Ultimate ah. Codsigan waa mid ka mid ah nooc ka mid ah tan iyo markii ay taageerto oo dhan qaabab video. Waxa kale oo ay si toos ah kuu ogolaanayaa in aad sii qulquli videos, laakiin files qaar ka mid ah aad u baahan tahay si ay u badalo si qaabab socon sida MKV si ay u ciyaaro PS3.
Sida loo dayactir VLC ma taageeri Qaabka UNDF?
> Resource > VLC > Sida loo isticmaalo VLC u PS3?